९ महीनामा सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६ करोड
वैशाख १६, काठमाडौं । चालू आवको ९ महीनामा सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ६ करोड १ लाख ७९ हजार रहेको छ ।
कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट एनएफआरस प्रणाली अनुसार विभिन्न शीर्षकमा छुट्याए पछिको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो । कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४ करोड २५ लाख ७३ हजार खुद नाफा कमाएको छ ।
यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. ५ करोड २३ लाख ३४ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा कमी आएको नाफा घटेको हो ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ४ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १७ प्रतिशतले कमी आएको छ । नाफामा कमी आएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि कमी आएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव ६५ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा घटेर रू. ५ दशमलव १० मा सीमित भएको हो ।
चुक्तापूँजी रू. ८३ करोड ४३ लाख ३८ हजार रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ९ करोड २१ लाख २९ हजार र रिटेन्ड अर्निङमा रू. ६ करोड १ लाख सञ्चित गरेको हो ।